Avereno ny HomePod mankany amin'ny sehatry ny orinasa | Avy amin'ny mac aho
Avereno ny homePod amin'ny toeran'ny orinasa
Roa andro lasa izay no nanaovako ny fividianana ny HomePod tany Angletera an-tserasera ary androany, tsy niandry izany, tonga ny irakiraka nitondra fonosana izay, rehefa hitako dia nampisondrotra ny fitempon'ny foko ary izany dia, ny HomePod ahy dia ambany noho ny iray metatra tamiko, tao anaty fonosiny ary niandry ahy hanokatra azy haingana araka izay tratra.
Ny HomePod izay novidiko dia ilay maodely fotsy ary nataoko tamin'ny eBay tao amin'ny fivarotana UK izany, raha ny tena izy. Nanana vidiny tena lafo aho satria tsy ny olona rehetra no mandefa ny vokariny any amin'ireo nosy Canary.
Rehefa esorinao ivelan'ny boaty ny HomePod, ny zavatra voalohany tsapanao dia tena mifintina izy ary tsy azo tsinontsinoavina ny lanjany, na eo aza ny habeny dia mavesatra be izany. Miaraka amin'ny lanjan'ny roa kilao sy sasany eo ho eo, izay ametrahanao azy no itoerany ary na eo aza ny hovitrovitra vokariny rehefa manomboka miteraka ny feo dia tsy mihetsika fihetsika tsy ilaina izany.
Rehefa ampidirinao ao anaty mains, ny zavatra voalohany tsikaritrareo dia ny eo amin'ny efijery ambony dia manomboka mihodinkodina miloko somary mena ny marika Siri mba ahitanao fa voalamina. Tsy ho ela Misy varavarankely pop-up miseho amin'ny iPhone izay anomezana anao safidy hanombohana ny fanahafana izay hazavaiko aminao amin'ny lahatsoratra natokana.
Rehefa vita ny fanamboarana dia vonona hampiasa HomePod ianareo rehetra. Tokony hotadidinao fa ny HomePod dia voalamina miaraka amin'ny Apple ID ka Raha te hampiasa azy amin'ny iPhone hafa miaraka amin'ny ID Apple hafa ianao dia tsy maintsy hamerina azy io ary eto no tiako hanazavana ny fomba ny fizotrany satria sarotra tamiko ny nianatra azy.
Inona no tokony hataonao mba hanajana ny HomePod avy amin'ny HomePod mihitsy no manaisotra azy amin'ny mains, miandry 5 segondra. Ampidiro indray ary miandry 5 segondra hafa. Amin'izay fotoana izay dia apetratsika eo amin'ny efijery ambony ny rantsan-tananay ary avelantsika tsy hampihetsika azy ary ho hitanao fa ny marika Siri izay lasa fotsy dia lasa mena ary ny HomePod, Sa kosa i Siri mihitsy no mampahafantatra anao fa rehefa mandre bip telo ianao dia haverina amin'ny laoniny ny HomePod.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Avereno ny homePod amin'ny toeran'ny orinasa
Ahoana ny fomba hahitana ny fanitarana ny rakitrao amin'ny Mac foana